आठ हाइड्रो सहित ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? - नेपालबहस
आठ हाइड्रो सहित ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ?
| २०:१३:४३ मा प्रकाशित
२७ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार शेयरबजारमा ११ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ । यस दिन ८ हाइड्रोसहित ११ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स र निफ्रासहित ८ हाड्रो कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, सीइबीडी हाइड्रो, बरुण हाइड्रोपावर र रिडि हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्टिसीटी, नेशनल हाइड्रो र अरुण भ्यालीको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ ।
यस दिन सबैभन्दा सीइबीडी हाइड्रापावर कम्पनीको शेयरमा खरिद माग आएको छ । सीइबीडी हाइड्रोको हिजो आईपीओ सूचीकृत भएको हो । आईपीओ सूचीकृत पश्चात बुधबारदेखि नेप्सेमा कम्पनीको कारोबार सुरु भएको हो । कारोबारको पहिलो दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ ।
सीइबीडी हाइड्रापावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ६ लाख ६८ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा ६ लाख ६८ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश शून्य रहेको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग हुँदा शेयरमूल्य ९.८६ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४१ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५०२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट
हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटीको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ५ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा५ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ४ लाख ७३ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग हुँदा शेयरमूल्य ८ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४२ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५८६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
बरुण हाइड्रोपावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ७० हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ७० हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ९७ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग हुँदा शेयरमूल्य ९.८६ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ५३ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस दिन रिडि हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ३१ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा २ लाख ३१ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ७९ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग आउँदा बिक्री आदेश न्यून हुँदा शेयरमूल्य ९।८९ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ५७ रुपैयाँले बढेर प्रतिबित्ता शेयरमूल्य ६३३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा २ लाख ८६ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा २ लाख ८६ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा १ लाख ३९ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
आज बैंकको शेयरमा खरिद माग र बिक्री आदेश केही अन्तर रहेकाले बैंकको शेयरमूल्य घटेको हो । यस दिन बैंकको शेयरमूल्य ८ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५४१ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस दिन लगानीकर्ता नेपाल नेपाल फाइनान्सको शेयरमा झुम्मिएका छन् । बैंकको शेयरमा ३ लाख ३५ हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको शेयरमा ३ लाख ३५ हजार कित्ता शेयर माग आउँदा बिक्री आदेश ३ लाख बढि कित्ता रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा खरिद मागको तुलनामा बिक्री केही समान हुँदा शेयरमूल्यमा सामान्य अंकले बढेको हो ।
सामुदायिक वनमा १५ वटा पानीको पोखरी निर्माण ३ दिन पहिले
सोल्टी होटलको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि, प्रतिकित्ता शेयरमूल्य कति ? ५ दिन पहिले
आजदेखि एनआईसी एशिया बैंकको ६२ हजार कित्ता शेयर लिलामीमा २ महिना पहिले
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ मा नेपाली अक्षर र अङ्कको माग ३ महिना पहिले
संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन ४ हप्ता पहिले
चालक र स्कारपियो त्रिशूलीमा बेपत्ता, गाडी धनी प्रहरी सम्पर्कमा १२ महिना पहिले